मोबाइल धेरै वर्ष टिकाउनको लागि यसरी राख्नुस् आफ्नो मोवाइल सुरक्षित ! | News Polar
मोबाइल धेरै वर्ष टिकाउनको लागि यसरी राख्नुस् आफ्नो मोवाइल सुरक्षित !
न्यूजपोलार असार ०२, २०७८, बुधबार
काठमाडौं । यो जमाना भनेको टेक्नोलाजिको हो । हरेक व्यक्तिको हातहातमा मोवाइल रहन्छ । अहिले त एक व्यक्तिको एक होइन, विभिन्न ब्रान्डका २–३ वटा मोबाइल हुन थालेका छन् । तर, हजारौं मूल्यका यी सामग्री सामान्य कुरामा ख्याल गर्न नसक्दा चाँडै बिग्रन सक्छन् । केही त्यस्ता सामान्य कुरा, जसको ख्याल गर्ने हो भने हाम्रो मोबाइल धेरै वर्ष टिक्न सक्छ ।
१) स्क्रिन सधैँ सफा गर्नुपर्छ । हामीले स्क्रिन सफा गर्दा जस्तो पायो त्यस्तै कपडा र सामग्रीले सफा गर्छौँ, यसो गर्नु हुन्न । सकेसम्म नरम कपडाले स्क्रिन सफा गर्नुपर्छ ।
२) हामी जति वेला पनि वाइफाई खोलेर राख्छौँ । कामका वेला मात्रै वाइफाई खोल्नुपर्छ । जति वेला पनि खोल्दा भाइरस छिर्नेलगायत समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् ।
३) ब्याट्रीलाई सधैं फुल चार्ज गरेर मात्रै चलाउनु पर्छ ।
४) युएसबी चार्जिङ पोर्ट सधैँ सफा गर्नुपर्छ । हामी कोही पनि यस विषयमा ख्याल गर्दैनौँ । मोबाइलभित्र अत्यधिक फोहोर हुने पहिलो कारण भनेकै यही हो ।
५) मोबाइलमा भएका टेम्पोररी (क्यास) क्लियर गर्नुपर्छ । नत्र, मेमोरी फुल हुँदै जान्छ र ह्याङ हुने तथा बिग्रने समस्या बढ्दै जान्छ ।
६) स्क्रिनको सुरक्षाका लागि स्क्रिन कार्ड लगाउनुपर्छ । यसले मोबाइलको स्क्रिनलाई फुट्नबाट बचाउँछ ।
७) मोबाइलको चार्जिङ भोल्टेज डिसी फाइभ भोल्टेजको प्रयोग गर्नुपर्छ । यो चार्जरमा लेखेको हुन्छ । तर, कसैले पनि यो कुराको ख्याल गरेको पाइँदैन । त्यसले गर्दा मोबाइलमा आवश्यकभन्दा बढी चार्ज छिर्न सक्छ र मोबाइल बिग्रन सक्छ ।
८) फुलेको ब्याट्री कहिल्यै प्रयोग गर्नु हुँदैन । फुलेको ब्याट्री प्रयोग गर्दा मोबाइल पड्कन सक्छ ।
९) मोबाइल कभर लगाउनुपर्छ । यसले मोबाइल हातबाट झर्‍यो भने सुरक्षित हुन्छ ।
१०) मोबाइललाई तरल पदार्थबाट टाढै राख्नुपर्छ । यो इलेक्ट्रोनिकको भाइरस हो । मोबाइलमा तरल पदार्थ छिर्नु भनेकै मोबाइल बिग्रनु हो । (एजेन्सीको सहयोगमा)
प्रकाशित : असार ०२, २०७८, १०:१६:३८
हावामार्फत् प्रकाशपुञ्जका माध्यमले उच्च गतिको इन्टरनेट